Anyị Achọrọ Branddị? | Martech Zone
Ndị ahịa na-egbochi mgbasa ozi, ọnụahịa bara uru na-ada, na ọtụtụ ndị agaghị achọ ịma ma ọ bụrụ na 74% nke ụdị okụrede kpam kpam. Ihe akaebe na-egosi na ndị mmadụ adabaghị n'ịhụnanya ụdị.
Yabụ kedu ihe kpatara ya na ọ pụtara na ụdị ga-akwụsị ibute ihe oyiyi ha ụzọ?
Ike Ndị Ahịa
Ebumnuche dị mfe mere a na - ewepụ ụdị n'ụdị ike ha bụ n'ihi na enwetabeghị ikike karịa ndị ahịa taa.
Yingga maka ika iguzosi ike n'ihe mgbe niile siri ike ma ugbu a ọ bụ ọgụ na-agba ọkụ; ịbawanye na mgbasa ozi dijitalụ pụtara na ngwaahịa kachasị mma, na ọnụahịa, bụ naanị pịa pịa. A Ihe omuma ihe omimi banyere ihe mgbasa ozi kpughere na ndị na-eri ihe na-ahụ ihe dịka mgbasa ozi 5000 na ngosipụta ọhụụ kwa ụbọchị
Enwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche maka ndị ahịa na mgbe ụfọdụ, a na-ahụ ụdị na-ere ha ka ọ dịkarịa ala dị mkpa, ọ bụ maka ọrụ ụdị ahụ na-enye ma ọ bụ ọnụahịa ha na-ere ngwaahịa na nke ahụ mere ka otu ụlọ ọrụ dị iche na ndị ọzọ. Tụkwasị na eziokwu ahụ bụ na ndị na-azụ ahịa na-ejikọ ugbu a na ụdị na ọtụtụ ọwa, ọ na-esiwanye ike maka ndị na-ere ahịa na ndị mgbasa ozi iji nweta nlebara anya.
Nkasi Obi N'ime Mkpesa Mmetụta
Ọnọdụ ndị a pụtara na ụdị ọrụ enyere taa kwesịrị ịbụ ndị ahịa-nke mbụ. Ndị ụlọ ọrụ na-enwe ihe ịga nke ọma na-ebute ahụmịhe onye ọrụ karịa uru mmetụta uche na mmụba ọhụụ na mpaghara ogologo oge. Naanị ile Uber na-akpaghasị ụlọ ọrụ mgbazinye nke onwe ma ọ bụ Airbnb na-agbanwe ihu njem. Spotify bụ ihe atụ nke ụlọ ọrụ nyere ohere ịnweta karịa inwe nke mbụ.
Ndị ahịa na-ahọrọwanye ngwaahịa na ọrụ ndị na-enye ihe achọrọ, ahụmịhe ndị ọrụ klaasị kachasị elu na mkpesa mmụọ na nnukwu echiche. Uber, Airbnb na Spotify ahụla nnukwu ihe ịga nke ọma n'ihi na ha enweela ike ịnye ahụmịhe ndị ahịa na-agbanwe agbanwe nke na-edozi nsogbu ụlọ ọrụ ndị dị adị enwebeghị.
N’ihi atụmanya ndị a na-arị elu, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-enwe ọgba aghara mgbe niile. Enwere ụlọ ọrụ na-eto eto mgbe niile nke nwere ike ịnye ọrụ dị mma karịa onye ọkpụkpọ amalitegoro. Nke a na-amanye ụdị ọ bụla iji gaa n'ihu na-azụ egwuregwu ha n'ihe metụtara ahụmịhe ndị ahịa, ndị ahịa na-erite uru na asọmpi kpụ ọkụ n'ọnụ.
Brand Image vs. Ahụmịhe Ndị Ahịa
Mee elu mee ala, ụdị ndị na-eme nke ọma taa anaghị adabere na akara ngosi ha naanị na ndị ọzọ na ahụmịhe nke ndị ahịa banyere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha. Ya mere, ọ bụ ezie na uru nke ụdị nwere ike ịdalata, uru nke mmekọrịta ndị ahịa na-arị elu.
Dị ka Scott Cook kwuru n'otu oge, "Ahịa abụghịzi ihe anyị na-agwa ndị na-eri ya, ọ bụ ihe ndị ahịa na-agwa ibe ha na ọ bụ." Inye ahụmịhe ndị ahịa pụrụ iche dị oke mkpa maka ụdị iji kwado ikwado iguzosi ike n'ihe ma hụ na ndị ahịa na-ekerịta ahụmịhe dị mma.
Dị na-eguzo maka ihe
Imagedị akara ga-adị mkpa mgbe niile mana ọ na-eyiri ọhụụ. Ndị ahịa na-achọkarị ka ha na ndị ahịa na-eguzo maka otu ihe ahụ dịka ha na-eme n'otu n'otu, agbanyeghị ugbu a, a na-atụ anya ka ndị ahịa mee ihe na nkwa ndị ahụ. Ha kwesiri ime ihe ha na-ekwu na akara ha na-anọchi anya ya n'ihi na mbata abanyela n'oge ngosipụta. Ndị na-eto eto na-azụ ahịa na-achọ ụdị aha dị na akụkọ ha na-akọ.
Tony's Chocolonely bụ ihe atụ na-adọrọ mmasị site na Netherlands; ika ahụ nọ na ozi iji nweta chocolate% na-enweghị ohu. N’afọ 100, onye guzobere ụlọ ọrụ ahụ chọpụtara na ụlọ ọrụ chọkọleti kachasị na ụwa na-azụta chocolate si na koko ndị na-eji ịgba ohu ụmụaka eme ihe n’agbanyeghi na ha binyere aka na nkwekọrịta mba ụwa megide ịgba ohu ụmụaka.
Iji luso ọgụ ahụ, onye nchoputa tụgharịrị onwe ya na 'omekome chocolate' site na iri chocolate na ezighi ezi ma kpụga ya n'ụlọ ikpe. Companylọ ọrụ ahụ si na ike banye n'ike na 2013 rere ụlọ mmanya 'Bean to Bar' mbụ ya n'ihi nkwado ọ rụpụtara maka ọrụ ya. Ndị ahịa abụghị naanị ịzụrụ n'ime chọkọletị kamakwa ihe kpatara eji mepụta ika ahụ iji dozie.
Vnyochagharị Ihe ịma Aka nke 21st Century
Anyị ga-achọ ụdị mgbe niile, mana maka ika ị ga-ahụ n'anya stakes dị elu taa. Ọ bụghịzi maka imepụta akara ngosi mana na-egosipụta ụdị ahụ n'akụkụ niile nke azụmaahịa na azụmaahịa. A na - eme ụdị ndị ahụ ugbu a site na ahụmịhe ha na - enye ndị ahịa ha.
N’ikpeazụ, akara ngosi dị mkpa karịa mgbe ọ bụla - ọ gbanwere ya. Dị ga-amụta ịkwado ndị ahịa ọhụụ, enyere ikike nke na-achọ akara na-egosi maka ihe. Ọnọdụ dijitalụ ọhụrụ a na asọmpi a bụ ihe ịma aka mana ọ ga-enyekwa ohere iji nwee ihe ịga nke ọma na oge ọhụụ a.
'Suga nke ọma n'oge ọhụụ' bụ isiokwu afọ a maka ogbako Bynder na-eme kwa afọ nke OnBrand ebe ndị na-ekwu okwu si ụdị dị ka Uber, Linkedin, Twitter na HubSpot kọọrọ ha akụkọ gbasara otu esi ewulite akara ngosi na narị afọ nke iri abụọ na otu.
Debanye maka akụkọ kachasị ọhụrụ banyere OnBrand '17
Tags: brandihe oyiyimbọnakaahụmahụ ahịa